Ubungozi siyingxenye ebalulekile kunoma iyiphi ibhizinisi nemisebenzi. Kunoma yini oyenzayo, kukhona njalo ukuthi kungenzeka ukuthi kwenkinga. Lokhu kuyaphawuleka ikakhulukazi ibhizinisi, njengoba kule ndawo izingozi ezikhona ngezindlela ezihlukahlukene futhi zingavela ezindaweni ezingalindelekile futhi zikhathi. Yingakho kukhona indlela ingozi-based, okuvumela the ningi NEMPUMELELO NGAPHAKATHI usebenze nemibandela kwengozi. Kuyini yale nqubo? Yiziphi izici zalo khona? Kungakhathaliseki ukuthi isetshenziswa WaseRussia, futhi uma kunjalo, ngasiphi ezingeni? Lesi sihloko uzobe anikelwe ngokuphelele yokuthi ukuthi ingozi ezisekelwe ukuzifinyelela, futhi yonke imininingwane ezithinta kuye.
Ngakho, okokuqala udinga ukuqonda ukuthi indlela ingozi ezisekelwe. Cabanga inkampani isebenza kunoma iyiphi emakethe. Buningi ubungozi obukhona ezithinta naye, kuye ngokuthi hlobo luni lomsebenzi ke lucwaningo. Kuphethe ukulawula kanye ukubhekwa nokusebenza ngesikhathi isitshalo kungaba kwenziwe ngezindlela eziningi ezahlukene, kodwa usanda kuthola ukuthandwa enkulu ngaso sonke isikhathi indlela ingozi ngamakhasimende. Ingabe uhlaziye konke izingozi ezingase zibe khona, ezihlobene ibhizinisi, ivelele phakathi kwabo ngobukhulu, ikhipha aphume lezo musa kuthinte kakhulu umsebenzi ibhizinisi, bese kudala isu agcwele ukubhekana nazo, inkampani ongasebenza njengoba kahle ngangokunokwenzeka, ekunciphiseni amathuba abo. Ngakho ukuthi ngokuyisisekelo le ndlela, ngamanye amazwi, ukuthola izinto letivimbela inkampani ukusebenza emazingeni ngamaphesenti ayikhulu, futhi yokululama yabo okwalandela.
Ubudlelwano lobungozi kanye ibhizinisi
abanikazi abaningi bezebhizinisi bangase bacabange: kungani kudingeka enze izinto ngendlela ingozi ezisekelwe kokumelwa nokuphoqelela imisebenzi? Phela, inkampani yabo incane, futhi ngenxa yalokho izingozi konke phezu, futhi ingozi yangempela eziyiyo. Nokho lokhu kungaphandle kwesiko sidukisa kakhulu. Ngisho inkampani kulencane ungaba eziningi ezahlukene zici eziyingozi, eziningi zazo efihlekile emehlweni ka engumshumayeli. Ngenxa yalokho, benza kungaqashelwa, ziyasetshenziswa futhi kuvumele uhlelo inkampani ukufeza umgomo oyifunayo. Ngakho, indlela ingozi ezisekelwe kokumelwa nokuphoqelela imisebenzi kubaluleke kakhulu, njengoba ikuvumela ukuba ukuhlonza zonke izici eziyingozi ngaphambi kokuba u kugcwaliseke, bese ukuguqula lolu lwazi ku-ibhizinisi uhlelo olugcwele, okuvumela inkampani isebenze, ukugwema ukuqaliswa ngaleyo ndlela ethile eyingozi, okwandisa umkhiqizo wabo. Kepha usomabhizinisi lowo uzokwazi ukubona ngokucacile lokho izinqubo angaphansi ingozi enkulu - hhayi ukusebenzisa kwabo ukwandisa amathuba abo okuphumelela. Awu, manje wazi Imibandela yini le ndlela. Sekuyisikhathi ahlukanisa wona ezingxenyeni futhi bahlolisise ngaphezulu.
Ngaphambi kokuya isicelo yenchubomgomo ingozi-based, udinga ukuba awaqonde ngokucacile imiqondo eyisisekelo ezihlobene nale nqubo. Futhi into yokuqala, yebo, kunengozi. Kuyini lokhu? Engozini ehloselwe umcimbi othize ukuthi akukenzeki futhi ayenzeki futhi kungenzekani esikhathini esizayo - futhi ngesikhathi esifanayo it has kumaphesenti athile amathuba ukulimala ibhizinisi lakho. Ukuba yinkimbinkimbi lapha wukuthi ingozi kungaba ngokuqondile umcimbi, kanye isici ezithinta abanye. Akufanele sibakhohlwe ukuthi kungase kwenzeke noma kungenzeka kungenzeki, umphumela wawo angaba mabi futhi umnene. Yingakho ochwepheshe batusa isimemo wale ndlela ukusetshenziswa kwaso, njengoba kakhulu incike isipiliyoni uchwepheshe. Indoda isebenza indlela ingozi ezisekelwe akuyona onyakeni wokuqala, ke uyokwazi kakhulu ngokunembile futhi ngokushesha ukunquma kobukhulu izici ezithile ingozi ukuhlukanisa phakathi kwabo.
I kokuqala asalile izingozi
Yini enye okudingeka ukwazi indlela ingozi ezisekelwe? Izinhlangano ukuyisebenzisa kaningi. Nokho, kutuswa ukuba usebenzise amasevisi ochwepheshe, njengoba kuzokusiza ukuba wenze kahle kunazo zonke ingozi uhlelo ibhizinisi lakho. Ngokwesibonelo, cishe ngeke azi ukuthi izingozi kokuqala asalile nokuthi mehluko phakathi kwabo. Yiqiniso, kufanele ngifunde ngayo, ngisho noma ungenawo uhlela ukusebenzisa le ndlela, ngoba ulwazi kubaluleke kakhulu. Iqiniso liwukuthi ngezinye izikhathi ngisho izinyathelo ezinzima kakhulu ngeke akunike isiqinisekiso ngokuphelele ukuthi ingozi ngeke isebenze. Yingakho kukhona lokhu umehluko. Ubungozi kokuqala - nguye lenesicalo, ngaphandle party kokungenela wesithathu engxenyeni yakho, kuyilapho asele - ingenye ukuthi uhlala emva zonke kungenzeka noma kuthathwa izinyathelo zokulungisa Benziwe. Ngokwemvelo, iningi ingozi asalile lungaphezu mancane amathuba okuthi kusebenze futhi kancane kakhulu kunalokho umonakalo okungenzeka. Futhi kwenza kucace ukuthi indlela ingozi ezisekelwe ukulawula kuyinto ngempumelelo kakhulu futhi kakhulu ewusizo noma luphi uhlobo lwebhizinisi.
Izikhathi eziningi ngaphezu kwezihlalo elithi "ingozi factor" kwakukhulunywa ngaye - kodwa kusho ukuthini? Lokhu kuwumphumela yikuphi ukwenza, amaphutha noma isimo, ngenxa okuyinto kukhulisa ematfuba ingozi ethize, kanye kwandisa amathuba umonakalo ukuthi kuzokwenziwa lapho isebenze. Omunye eyingozi eyehlayo ingozi inqubo ukusetshenziswa imbangela, futhi lokhu akulona iqiniso elikhulu phakathi kwabantu abaningi. Iqiniso liwukuthi imbangela kuyisici, kodwa akuzona zonke izici ziyimbangela. Kulula ukukhumbula ukuthi ingozi ukusebenza isizathu ingenye, kanti izici ezingezinhle ezokwenza sandise amathuba kusebenze futhi kukhulisa umonakalo kungaba kakhulu. Akukhona Kunzima ukucabanga ukuthi kulezo zimboni kuzohluka njengoba zici eziyingozi, futhi ngokwako indlela ingozi ezisekelwe. Ukuvikelwa zabasebenzi, ezifana engcupheni neze zizofana nalezo zikamagazini okuyinto akhona emkhakheni ibhizinisi elincane. Ngakho, manje abe nomqondo jikelele ukuthi isebenza kanjani. Sekuyisikhathi ukubheka Ngokwesibonelo sobala. Futhi lokho lungcono muva waqala inqubo ekusebentiseni indlela ingozi ezisekelwe enhlanganweni lokulawula isimo begodu nokutjheja Russian Federation?
Okokuqala ngo-Ephreli 2016 e Russian Federation isikhipha umyalo Government of indlela ingozi-ngamakhasimende kanye nenqubo imisebenzi asimeme. Ngokusho kwakhe, kwanqunywa ukuba ukwethula le ndlela ezingeni likazwelonke ukuthuthukisa ukusebenza kanye nempumelelo weenhlangano zomphakathi. Ngomqondo onabile, inkulumo Kwenzeka okufanayo kwezamabhizinisi - usomabhizinisi kufanele uthathe isinqumo nokuqalisa indlela ingozi-based, kanti usevele kuqinisekiswa amadokhumenti, iqala lonke inqubo, okuyinto manje okuzoxoxwa ngayo.
Icacisa izinhlobo control
Ngakho, lapho wena ukuqala indlela ingozi olusekelwe phezu kwemiphumela yiyona inhlangano control isimo ka uhulumeni waseRussia Fedeartsii? Kwasekuqaleni, isinqumo soMthetho woHulumeni ziye designated izinhlobo control, okuzoba ishintshe emva kusungulwa kulendlela. Ngamanye amazwi, indlela ingozi-based, lapho sezisebenza sizothinta hhayi zonke izindawo, kodwa lezo zikhonjwe isinqumo kuphela. Kuyini lokhu sphere? Ngokuhambisana isimemezelo, lezi zinhlobo ezilandelayo ukulawula isimo kanye nokuqondisa oyokwenziwa nge ukusetshenziswa indlela ingozi ezisekelwe: federal umlilo isimo kweso, federal isimo sanitary kokuqondisa epidemiological, federal isimo kokuqondisa emkhakheni yokuxhumana kanye federal isimo kokuqondisa kuka-ukuhambisana komthetho wezabasebenzi. Nokho, lokhu akukhona ulwazi okwakuwukuphela eziqukethwe isinqumo.
Lokho namanje equkethwe isimemezelo owawuthi ngoba zokukhulekela eshiwo ngenhla wethulwa a indlela ingozi ezisekelwe? ngokugadwa State kulezi zindawo ngeke kwenziwe ngokuhambisana nemithetho, eyayibonakala futhi zikhonjwe umbhalo ngesinqumo. Ubude labelwe 21 mthetho. Bayakukhanda abanamathela zikahulumeni ngesikhathi kweso elibukhali emasimini abo abafanele.
imikhakha ingozi kanye nenqubo ekufakweni
Kodwa lolu lwazi bunikezwa Isinqumo, akugcini - nezigaba zawo eziqondile ingozi kuchazwe ingozi amakilasi, futhi ikakhulukazi izenzo phezu ukuthola isigaba esithile ingozi. Ngaphezu kwalokho, embhalweni isinqumo esenziwe futhi nendlela ukuqokwa umuntu noma inhlangano ukuba isigaba esithile ingozi. Empeleni, lokhu theory okuyingxenye iphelile - futhi ngo-Ephreli 2016 isimemezelo ekuqaleni ukuthatha nomphumela ngezigaba. By the way, inqubo Namanje hhayi kuqeda, ngakho-ke ngeke kube mnandi ukubheka ukuthi iziphi izinyathelo kakade kuphothulwe ngempumelelo, okuyizinto ngesikhathi sokwenza umsebenzi, futhi okuyinto engazange ngisho waqala futhi kuphela ihlelelwe ngosuku oluzayo.
Isabelo sokuqala esisebenzayo, eyaqala ngo-May 2016, kwaba ekuthuthukiseni izindlela ukubala amanani nemingcele, okuzokwenza isetshenziswe kamuva ekuhloleni ukucacisa ngobucayi izici ezihlukahlukene futhi ingozi ngqo uqobo. Qaphela ukuthi le nqubo kubaluleke kakhulu isikhathi, ngoba, eqinisweni, ukuthi imiphumela ziyoba isisekelo Lwezinhlelo umsebenzi esikhathini esizayo. Ngakho, lesi sinyathelo lusaqhubeka, nakuba babengekho waqala izinyanga eziningi edlule.
Ngokuphathelene lesi sinyathelo, kwaba esifushane kakhulu futhi esheshayo - kwakudingekile ngokuhamba ke umthetho ukusetshenziswa le ndlela ekuqhubeni ukuhlolwa unscheduled. Lokhu kwakwenziwa sonyaka ka-2016 yesibili.
Isinyathelo esilandelayo kwaba ukulungiswa imihlahlandlela enemininingwane, okungase ukusebenzisa nohulumeni olufanele ukuba asebenzise indlela ingozi ezisekelwe emisebenzini yayo. Lesi sinyathelo kuzodinga eziningi umzamo, ngoba kusho khona msebenzi, ngokuhambisana okuyinto izincomo izokwakhiwa. Yingakho period ukuqaliswa kwento kuhlelelwe Februwari 2017 - futhi iziphathimandla wemfanelo namanje sisebenza kokuqedwa kwalo.
Ehamba phambili ngemiphumela yokuqala
Ngu-March 2017 imiphumela owandulelayo ukuqaliswa indlela ingozi ezisekelwe esimweni kokuqondisa emizimbeni eshiwo ngenhla kufanele alethwe. Iqiniso lokuthi le ndlela esikhathini esizayo sihlelwe ukusebenzisa kabanzi okuningi, ngakho manje-ke luyasetshenziswa kuphela inani elilinganiselwe izindawo, futhi manje kukhona ukuhlolwa kanjani ngempumelelo le phrojekthi. Ngo-March 2017 uzobe wafingqa futhi, ngesisekelo imiphumela, isinqumo senziwe ngendlela ngokushesha sizonwebisa uhlu olwandayo lwezilwane nezimila okugada, futhi lokho kuzoba ngo 2018, ie ngesikhathi ekuphumeleliseni ngalokuphelele lendlela emizimbeni ukwengamela yomphakathi .
Ngo-June 2016 sasiqhutshelwa workshop kuqala ku exchange of imikhuba ngempumelelo ukusebenza yenchubomgomo ingozi ezisekelwe ku control kanye nokuqondisa emizimbeni. Kulesi sinyathelo asikho isimiso ukulinganiselwa, njengoba kufanele kwenziwe njalo ngemva kwezinyanga eziyisithupha. Kungenzeka ukuthi okwamanje emva ukusetshenziswa ngokuphelele kohlelo zizokwenziwa izinguquko, kodwa kuze kube 2018, lezi workshop izobanjelwa njalo ngemva kwezinyanga eziyisithupha, okuzokwenza ngcono kakhulu ukusebenza iphrojekthi.
"Pemos" - powder ngesandla futhi umshini ukugeza
Indlela wean ikati Shit endaweni engafanele